ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး ( အပိုင်း-၃) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး ( အပိုင်း-၃) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး ( အပိုင်း-၃)
ကလေးတစ်ယောက်ကိုပြုစုရာမှာ ကလေး၏စိတ်ကျန်းမာရေးနင့် ကလေး၏သဘာဝကို နဲနဲပါးပါး တီးခေါက်ထားမိရန် လိုပါသည်။ ဆစ်ဒနီကလေးသင်တန်းတွင် ကလေး ငိုသံအမျိုးမျိုးကို တိတ်ခွေနှင့်ဖွင့်ပြပြီး သင်ပေးပါသည်။ ထို့ ထက်အဆင့်မြင့် တာကတော့ နေမကောင်းလျှင် ငိုသံအမျိုးမျိုးရှိသေးသည်ဟု အကြမ်း ဖျင်းပြောပြပါသည်။
ကလေး၏စိတ်သဘောနင့် သဘာဝကိုမိခင်က လေ့လာရချိန်ပိုများများရလေ ပိုကောင်းပါ၏ ။ မိခင်ကိုယ်တိုင်လည်း အသိဥာဏ်ရင့်ကျက်ရန်လိုပါသည်။ သဘာဝကြီးက မိခင်ကို စေ့ဆော်မှုတွေကလည်းအပံ့အပိုးရပါသည် ။
ကလေးအများစုတွင် မိဘနင့် ဆရာများကလိုသလိုပြုပြင်လို့ ရနိုင်တာ ၂၀-% သာရှိပြီး ၈၀-% ကတော့မူလဗီဇ အရပုံသွင်းပြီးဖြစ်ပါသည် ဟု ကလေးပညာရှင်များက ဆိုထားပါသည်။ ထိုကျနော်တို့ ပြုပြင်နို်င်သော ၂၀ %ကို
စောစောစီးစီးပြုပြင်ရပါသည်။ ပြုပြင်နိုင်လျင် ဘောနပ်သဘော နောက်ထပ်အနည်းငယ်ကိုယ်ဘက်ပါလာတတ်ပါသည် ။ ကျန်သည်ကမွေးရာ မူလဗီဇအတိုင်း သွားပါသည် ။
ထိုသို့ ပြုပြင်နိုင်ဖို့ပေါ့ပေါ့လေးတွေးလို့မရပါ။ ကျွန်တော့်သား အဆိုတော်ဘာဘူ၏ဇနီး အဂျီးက ကလေးကို လေ့လာရာတွင် ( observation )တွင်ကျနော်တို့ ထက်သာ၏။ မြေးမလေး စိတ်ကဘယ်လို ၊ ဘာကိုဘယ်လိုတုန်ပြန်တတ်တယ်တွေ လေ့လာထား၏။ ကလေးရဲ့ အကျော ၊ ကလေးသဘောကို သိထားတော့ ဆူငေါက်စရာမလိုဘဲ ကလေးကိုပြုပြင်နိုင်၏ ။ ထိုသို့ ကလေးကို လိုလေသေးမရှိ ပါးနပ်စွာ မြေးမလေးကိုပြုစု စောင့်ရှောက်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်လို့ကျနော်နင့် ဇနီးသည်တို့ က အဂျီးကို ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအနမ်း ကို ၄ - ၅ခါ ပေးဖူး၏။
ကျောင်းထားတော့လည်း Australia မှာနာမည်အကြီးဆုံးကျောင်း Montessori မှာထား၏။ ကျောင်းကိုနေ့ စဉ်လိုက်ပြီး ဆရာမတွေနင့် အိမ်မှာမိဖဘက်ကဘယ်လိုဆက်သင်ရမယ်ဆိုတာတွေ အမြဲဆွေးနွေး၏။ မြေးမလေးလိမ္မာဖို့ သူမ၏အချိန်တွေ အများကြီးရင်းနှီးထား၏။ မြေးမလေးသည် ၄-နစ်အရွယ်ကစလို့ သူ့ ကစားစရာများကိုကိုယ်တိုင်ထုတ် ကစား ၊ ပြီးကစားစရာများကို သူ့ဘူးနင့်သူပြန်ထဲ့ထား၏။ သူ့ အိမ်သွားကြည့်လျင် လူကြီးတစ်ယောက် သိမ်းထားပေးသလား ထင်ရအောင် သေသေသပ်သပ်သိမ်းထား၏။ ထိုသို့ လိမ္မာဖို့မိခင်အနေနင့် အဂျီးလို ကျောင်းကိုလိုက် ဆရာမတွေနင့်ဆွေးနွေးတာမျိုး လုပ်ဖို့ အသိလေးရှိဖို့ လိုပါသည်။ အလွန်ထူးခြားသော ရလဒ်ကိုလိုချင်လျင် သူမလိုလုပ်ရပါမည်။ ကျောင်းအပ်ရုံထားနင့်ကတော့ ဈေးချုပ် ( custom made ) ကလေးသာရပါမည်။
မိခင်၏မေတ္တာသည် အလွန်အခါရာကျပါသည်။ ကျနော်အလုပ် လုပ်သောကျောင်းတွင် သုသေသနသဘော၊ လစဉ်လည်း fire drill မီးလန့် လေ့ကျင့်ခဏ်းလုပ်လျင် ရံဖန်ရံခါ ကလေးမိဘတွေရှိနေချိန် လုပ်တတ်၏။ ကလေးသည်အဖေါ်တွေနင့်ကစားနေသော်လည်း မီးဥသြ ဆွဲလိုက်သည်နင့် အမေရှိရာကို မကြည့်ဘဲ ကွေ့ကောက်ရောက်အောင် ပြေးတော့၏ ။ မိခင်၏မေတ္တာသည် မည်မျှကလေး၏စိတ်ကို လုံခြုံမှုပေးနေသည်ကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ကလေးစိတ်ကျန်းမာဖို့ မိခင်က ကလေးနှင့် အချိန်ဘယ်လောက်ပေးသလဲ ၊ မိခင်များ ကိုယ်ကိုစီစစ်ကြပါ။ မုန့် တွေ ၊ အရုပ်တွေဟာ ဆာတုန်း၊ ကစားတုန်းသာ ခေတ္တစိတ်ဝင်စားမှုပါ။ မသိစိတ်နင့် မိခင်ကို တမ်းတနေတာကို မိခင်တိုင်း သိထားသင့်ပါသည်။ ငွေနင့် မေတ္တာကိုဝယ်မရနိုင်ပါ၊ စိတ်လုံခြုံမှုကို ငွေနင့်အပြည့်မဖြည့်စည်းနိုင်ပါ။ ဗွီဒီယိုအခွေနင့် အချိန်ပြည့် ပစ်ထားခြင်းသည်မကောင်းသော အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်၏ ။
မိခင်သည် ကလေးငယ်စဉ်ဘဝတွင် အရုပ်ထုလုပ်သလို ပုံကြမ်းလောင်းသူဖြစ်၏။ မိခင်လောင်းသောပုံကြမ်းက အချိန်တိုလေးနင့် မြန်ကောင်းသက်သာလုပ်လျင် ပေါချောင်ကောင်း ပုံကြမ်းသာရပါမည်။ ရုပ်တုလုပ်လျင် ပုံကြမ်းမကောင်းလျင် အချောကကောင်းလာစရာမရှိပါ ။ ဆရာတွေနင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံအချော ထုဆစ်သူတွေဖြစ်ပါသည်။ ပုံကြမ်းကောင်းလျင် ပုံချောလှပါမည်။
မိခင်သည် ကလေး၏ စိတ်စွမ်းအားမှီတင်းရာ ဌာနဖြစ်ပါသည်။ အဖေလည်း အထိုက်အလျောက်ပါပေမည့် ကလေး၏မသိစိတ်တွင် မိခင်သည် အဓိကနေရာမှာရှိနေပါသည်။ မြေးမလေးသည် အဖေါ်အနေနှင့် အဖိုးကိုအချစ်ဆုံး။ အလည်ထွက်လျင် အဖိုးလက်ကိုကိုင်၏။ အခြားမည်သူမှ လက်ပေးလို့ မရ။ သို့ သော်သူ အနာတရဖြစ်လျင် မိခင်ဆီသာပြေး၏။ အဖိုးလည်းမရတော့။
ကလေးစိတ်တွေက အလွန်နုးညံ့တာကိုလည်း ထဲ့စဉ်းစားထားရပါမည် ။
အချုပ်အနေနင့် every child is unique and there is no dry cut formula in child care. မိခင်သည် မူလ ပန်းပုဆရာမည်၏။ မိမိပန်းပုလေးကို ကိုယ်တိုင်ထုဆစ်တာလား ၊ ပညာမတတ်တဲ့ ကလေးထိန်းကို မိမိကိုယ်စားထု တစ်လ လခနည်းနည်းလေးပေးပြီး ဆစ်ခိုင်းထားတာလား.... ဈေးကြီးကြီးပေးကာ သင်ကြားတတ်သော ကလေးဆရာမနင့် ထုဆစ်ခိုင်းတာလား..။.
နောက်အပတ်မှာ ကလေးထိန်းကျောင်းမှာ ( ၂-၄ နစ် ) အခန်းမှာ လက်တွေ့ လေးတွေနင့် ( ၄- ၆ နစ် )အခန်းသင်ကြားမှုလေးတွေ တင်ပြပါမည်။
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပြည့်ဝသော အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်လေးများ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ကြပါစေလို့..
ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး ပညာရပ် (အပိုင်း ၁) ပြန်ဖတ်လိုလျှင် http://www.demowaiyan.org/2013/06/blog-post_6644.html
ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး ပညာရပ် (အပိုင်း ၂) ပြန်ဖတ်လိုလျှင် http://www.demowaiyan.org/2014/08/blog-post_8.html